PressReader - Ilanga: 2019-01-14 - Kumile ukufunda kwesabakhubazekile
Kumile ukufunda kwesabakhubazekile
Abanye abazali bephoqeleke ukuba baphinde nazo emuva izingane
Ilanga - 2019-01-14 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU [email protected]
SIBI isimo esikoleni sabakhubazekile - okuhlalwayo kusona ( boarding school) - iMason Lincoln Special School, eMlazi ngenxa yokungaqedwa ngesikhathi kokulungiswa kwaso osekuphoqe ukuba abanye abafundi balaliswe emagunjini okufundela abanye bagodukiswa.
Kubikwa ukuthi abafundi bavale izikole benenkinga ngokulungiswa kwalesi sakhiwo esakhahlanyezwa yimvula ehambisana nesiphepho ngo-2016. Ngokuthola kweLANGA, inkampani enikezwe umsebenzi wokulungisa lesi sikole, ibinikezwe izinyanga eziwu-6 kuphela kodwa isikhathi sashaya sadlula kungaqediwe.
UNkk Sbongile Thulile Mthembu ongusihlalo wesigungu esilawula isikole, uthi selokhu kuvulwe izikole izingane kazikaze ziqale ukufunda ngenxa yokungaqedwa ngesikhathi kwamagumbi okufundela nelokulala amantombazane.
“Umnyango wezeMfundo uqoke usonkontileka ngoMbasa (April) ngonyaka odlule wakalelwa izinyanga eziwu-6 ukuba aqede lo msebenzi ngoba izingane zihlala khona esikoleni futhi bezingenawo amagumbi okulala njengoba ebediliziwe ezolungiswa kabusha.
“Uze waphela unyaka umsebenzi ungaphelile kanti amanye amagumbi asavulekile, kuyabona- kala ukuthi kakukaze kwenziwe lutho. Njengoba kuvulwe izikole nje, abanye abazali bagcine be- phoqeleka ukuba baphindele nazo emuva izingane ngoba indawo yokulala kayikho,” kusho yena.
Uthi okubuhlungu kakhulu wukuthi ezinye izingane zisuka kude. Uthi ngisho umnyango wezemfundo bawubikelile ngale nkinga ngodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
“Izingane ezikulesi sikole zisuka ezindaweni ezahlukene okuhlanganisa KwaNongoma, eVryheid ngisho nase-Eastern Cape imbala. Kumele ngabe izingane ziyaqala ukufunda kodwa ngeke kwenzeke isimo uma sisenjena.
“Izindlu zangasese, yikhishi okuphekelwa kulona izingane, yigumbi elihlala othisha, amagumbi alala izingane konke akuphelile,” kusho yena.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthi umnyango uyalwazi lolu daba futhi uyalulungisa.
“Usonkontileka obenza lo msebenzi uzoshintshwa ngoba wehlulekile wukuwenza ngesikhathi abebekelwe sona. Mayelana nokuqala kokufunda, ngingasho ukuthi aba-hloli bamatasa bayalulungisa uda-ba kanti kulindeleke ukuba kuqa-lwe maduze,” kusho uMnu Mahlambi.
Usonkontileka obenza lo msebenzi uzoshintshwa ngoba wehlulekile...
UKUNGAQEDWA kokulungiswa kwesikole sabakhubazekile eMlazi, kwenze kwahlehliswa ukuvulwa kwaso.